Hlola i-Peru - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili ePeru.
Okufanele ukwenze ePeru.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePeru
Bukela ividiyo ekhuluma ngePeru
Bheka iPeru izwe eliseNingizimu Melika, elisentshonalanga yaleliya lizwekazi, libheke eSouth Pacific Ocean kanye nengxenye yezintaba ze-Andes ezihamba ubude baseNingizimu Melika. IPeru yizwe elinokuhlukahlukana nengcebo engavamile emhlabeni. Okuhehayo okukhulu ukuzonda kwabo kokuvubukulwa kwamasiko wangaphambi kwamaColumbi kanye nehabhu lombuso wamaInca, ubugqi babo, ukwakhiwa kwabo kwamakoloni (kuye kwakha ukwakhiwa kwamakoloni) kanye nezinto zabo zemvelo (ipharadesi lokuvakasha kwezemvelo).
Yize iPeru inezinsiza zemvelo ezicebile nezindawo eziningi ezinhle ukuhambela kuzo, isilinganiso sobuphofu sifinyelela ezungeze i-19% yabantu futhi kukhona izinga eliphakathi lokungalingani. Izicebi, eziqukethe iningi lamaSpanish (noma “uCriollo”), zihlala emadolobheni. Noma kunjalo, iningi labantu basePeru lingabezwe elikhulu futhi bathande izwe labo ngokuziqhenya (ikakhulu lisusela emlandweni wePeru njengesizinda sobukhosi base-Inca kanye Spain 's umbuso waseNingizimu Melika). Futhi, abantu abaningi basePeru bahlukanisa izwe lasePeru nohulumeni wabo emiqondweni yabo. Abaningi babo abethembi uhulumeni wabo namaphoyisa, futhi abantu basebenzisela ukulwa nenkohliso nokuhlambalaza, njengasemazweni amaningi. Umnotho wasePeru uphilile futhi uqinile ngesilinganiso esiphakeme sentuthuko yabantu kanye nezinga eliphakeme lokuhola eliphakathi. Futhi, ukuvakasha ePeru kukhula ngokushesha ukwedlula noma yiliphi elinye izwe laseNingizimu Melika.
Igama elithi gringo lisetshenziswa kaninginingi kepha alihloswanga ngokuvamile njengokucasulayo. Incazelo yokuqala yayihlanganisa bonke abantu abamhlophe abangakhulumi iSpanishi. Abantu abaningi basebenzisa igama elithi gringo kuphela kubantu baseMelika noma ama-sheba aseMelika. Akujwayelekile ukuthi abantu be-blonde babizwe nge-gringo. Abantu basePeru abathandabuzi ukukubingelela nge “Hola, gringo”.
Ngokuvamile, abantu banomusa kakhulu, banokuthula futhi bayasiza. Lapho usenkingeni, ungathembela kakhulu ekutholeni usizo. Kepha njenganoma isiphi isimo, kuhle ukuthi uziqaphele futhi uzame ukugwema izimo ezimbi.
IPeru akuyona neze indawo yokusebenza kahle. Ungalindeli ukuthi izinto zizofika ngesikhathi, noma njengoba zinjalo. Ngaphandle kwemisebenzi yokuhambela phezulu yabavakashi namadolobha amakhulu afana Lima, IsiNgisi asijwayelekile ngaphandle kwamadolobha amakhulu futhi abantu, bezama ukuba nobungane, banganikeza izeluleko ezingalungile noma ezingasho lutho, umhumushi angahlala esiza kulezi zimo. Hlela kusengaphambili futhi ushiye isikhathi esiningi sokuhamba. Impela, eminyakeni yamuva isiNgisi sifundiswa ezikoleni eziningi njengemfuneko kuhulumeni wasePeru, abantu abaningi bayasiqonda isiNgisi kodwa abasikhulumi. Njengakwamanye amazwe aseLatin naseYurophu, abantu basePeru bakhetha ukuthi izivakashi zisebenzisa ulimi lwazo. I-Mobile Technology ne-inthanethi zidambisa kalula ukufunda kolimi lwesiNgisi kulezi zinsuku.
I-Chan Chan - isethi ethandekayo yamanxiwa edolobha lasendulo laseChimor lodaka, kanye nesiza se-UNESCO World Heritage
Chavín de Huántar - UNESCO World Heritage Site kusuka kusiko langaphambi kwe-Incan Chavin lokuzungeza i-900 BC
IHuascarán National Park - ipaki ephezulu yezintaba e-Cordillera Blanca
ILake Titicaca - kubhekwa njengomzimba wamanzi wokuhamba emhlabeni ophetheka kakhulu emhlabeni
Machu Picchu - Le ngosi yamagugu omhlaba ye-UNESCO ingenye yezimpawu ezijwayelekile zoMbuso Wama-Incan, futhi ingenye yamasethi aziwa kakhulu futhi anamangalisa emhlabeni
IManú National Park - enye yezindawo ezihluke kakhulu ePeru
I-Nazca imigqa - umhlaba odume ngezibalo zawo zejometri nemidwebo enkulu esihlabathini sogwadule
IParacas National Reservation - indawo yemvelo ethandwa oGwini oluseningizimu
Ipaki Yesizwe YaseRío Abiseo
IMáncora - idolobha elincane lolwandle elinamabhishi amahle kakhulu nama-surf amahle, liphenduka idolobha lephathi yangempela ngezimpelasonto nangamaholide
Ngaphakathi emadolobheni, akuvame ukuba nenkinga yokuhamba ngamabhasi amadolobha noma amatekisi. “Itekisi” alisho imoto; leli gama libuye lisho amabhayisekili, motor rickshaws, kanye motor emabhayisekili ukuqasha. Amatekisi ahlukaniswe phakathi kwamatekisi “ahlelekile”, apendwe futhi amakwa kanjalo futhi anamatheli ane-SOAT, nalawo angakahleleki, ayizimoto nje ezinamatikeli ezinama-windhield athi “Taxi”. Eyokugcina ishiywe kangcono kubantu bendawo, ikakhulukazi uma ungakhulumi iSpanish. Ngaphandle kwetekisi yomsakazo ekhuphuka kakhudlwana (futhi ebiza kakhulu), imali yokuthenga ayilungisiwe noma i-metered, kepha kuyaxoxiswana ngayo nomshayeli ngaphambi kokungena emotweni. Buza ehhotela lakho noma ehostela mayelana nezinga ongalilindela ukukhokha ukuze uye endaweni ethile ukuze uthole iphuzu lesethenjwa. Akukho ukusikwa ngamatekisi.
Eminye imigwaqo emikhulu, ikakhulukazi ogudla ugu, ivelile, kepha kusekuningi imigwaqo yobhuqu esesimweni esibi kakhulu. Ngenkathi yemvula, ukugwilika komhlaba kungavimba imigwaqo emikhulu.
Ngaphandle komzila odumile we-Inca oya eMachu Picchu, ungenza izindawo eziningi ezihamba phambili kuyo yonke iSierra, mhlawumbe ngesizini eyomile, uncoma ukubhuka kusengaphambili, ngoba kunezikhala ze-500 ezitholakalayo zosuku. Uma ungathanda ukubhuka i-Inca Trail, i-minimun iyinyanga ye-6 ngaphambi kwesikhathi. I-Mecca ye-hiker's iHuaraz, lapho ungathola khona izinhlangano eziningi ezinikezela izinkambo eziqondisiwe kanye / noma imishini yokuboleka. Uhlaza oluthambile eSierra ephakeme lwenza kube lula ukuhamba ngezinyawo. Kunzima ukuthola amamephu amahle ngaphakathi kwePeru. Kungcono ukubazisa ekhaya. Qiniseka ukuthi une-iodine eyanele yokuhlanza amanzi akho okuphuza. Lapho uhamba endaweni ephakeme kakhulu, ukuqashelwa okuhle kubalulekile impela. Thatha isikhwama esihle sokulala nawe, ngoba ubusuku eSierra bungabanda kakhulu (-10 ° C ku-4,500m kokuwa okujwayelekile, kwesinye isikhathi kusabanda kakhulu). Qaphela ukuduma kwezulu okungavuka ngokuzuma okukhulu. Izinga lokushisa elisheshayo nemvula enamandla iyingozi enkulu ezindaweni eziphakeme kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi ubusuku buhlala amahora angama-12 unyaka wonke, ngakho-ke ukukhanya kwethoshi kungumbono omuhle. Lapho uhamba ngezinyawo ezintabeni eziphakeme, kodwa hhayi ezintabeni ezimbozwe yiqhwa, amanzi kungenzeka abe manqabile. Ukuthola utshwala ngezitofu kulula: Ungathenga utshwala obudaywe ngombala oblue okwesibhakabhaka noma, okungcono, umane uthenge utshwala bokunatha obumsulwa. Ungakuthola kulo lonke idolobhana. (Ungacabangi nokuyiphuza). Ngeke kube lula kangako ukuthola ipetroli ekhethekile yezitofu zikaphethiloli. Uphethroli wezimoto angatholakala nasezitolo eziningi zehardware (i-Ferreterias) ezithengiswa ngamalitha, kepha empeleni ungathenga wona ngqo eziteshini zikaphethiloli, inqobo nje uma uletha ibhodlela lakho.
Kungenzeka futhi ukubuka ingaphakathi lelizwe ngemoto. Lokhu kukunikeza ithuba lokuthi uyeke "ithrekhi eshaywayo" futhi uhlole ezinye zezindawo ezingashintshiwe ngezokuvakasha. Kudingeka Imvume Yokushayela Ngamazwe Ngamazwe ukuze ushayela ePeru.
Qiniseka ukuthi uletha igesi eningi, njengoba iziteshi zegesi ezindaweni ezingafakwanga zinqabile kakhulu futhi kuvame ukuvalwa kaningi. Ukuthenga igesi sekwephuzile ebusuku kungaba yinto emnandi ngokwayo, njengoba nasezindaweni ezinabantu abaningi iziteshi zegesi zivame ukuvala kusenesikhathi futhi amaphampu avalelwe. Umnikazi wesiteshi kwesinye isikhathi ulala ngaphakathi futhi, uma ungamvusa, uzophuma akudedele. Qaphela ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphezulu ezintabeni.
Njengasemazweni amaningi, nasePeru kunesixuku esikhulu sama-tout silenga eziteshini zezindiza naseziteshini zamabhasi noma esikhumulweni sebhasi. Noma yisiphi isinqumo esihlakaniphile sabahambi ukuba singenzi ibhizinisi nabantu abazama ukukuthengisela izinto zabo emgwaqweni / esiteshini sebhasi / esikhumulweni sezindiza. Okokuqala, uma bengaba nendawo ehlelekile, bekungeke kudingeke ukuthi bayithengise kubavakashi abangasoli abazama ukuyihudula ibasuse lapho ingabathola khona. Okubaluleke kakhulu, akuwona umqondo omuhle ukuthi unikeze umuntu wokuqala ohlangana naye imali lapho efika.
ICEBISO: Uma ufika kunoma yiliphi idolobha, qiniseka ukuthi ususithathile isinqumo sokuthi uzoya kuliphi ihhotela. Ungakusho lokhu noma olunye ulwazi emafutheni akulindelwe. Bazosebenzisa noma yini obatshela yona ukuthi bakhombise amanga ukuze bakwenze ushintshe ingqondo yakho uhambe nabo. Uma usuvele ukhethe amathuba afanele wehhotela ukuthi uzobe ulungile lapho futhi bazoba neminye imininingwane (eyengeziwe) ozoyifuna, njengokubhukelwa izinkambo noma amathikithi.
Njengabaningi baseNingizimu Melika, ulimi olusemthethweni lwasePeru iSpanishi.
IsiNgisi singase siqondwe yintsha Lima kanye nezinga (noma) elincane kakhulu ezikhungweni zezivakashi ezifana neMachu Picchu. Ngaphandle kwalokho, uzodinga iSpanishi.
Nge-84 yezindawo zomhlaba ezaziwa nge-104 zomhlaba, i-Peru inothile ngokuhlukahluka kwezilwane zasendle. Isigodi saseAmazon siyikhaya lama-dolphin apinki, ama-jaguars, ama-otter amakhulu omfula, izinhlobo zangaphansi, izinhlobo ze-4,000 zezimvemvane nengxenye eyodwa kwezintathu zezinhlobo zezinyoni ze-8,600.
Ukwehlukahluka kwabantu namasiko asePeru kubonakala ngesiko elicebile lemikhosi, umdanso nomculo. Ku-Andes, ukukhala okusobala komtshingo nokushaywa kwesigubhu kuhambisana nezingoma ezibonisa impilo yomdabu ngenkathi abadansi abashiywe njengamadimoni nemimoya kuwumshado wezinkolelo zobuqaba nezobuKristu. Ehlathini, umculo womdanso nokudansa iwindi empilweni yezizwe. Futhi ogwini, inhlanganisela yemisindo ebabazekayo yaseSpain nemigqi ethandekayo yase-Afrika kukhombisa ukuNqotshwa kanye nokwenziwa izigqila kamuva kweNew World.
Ukuhamba ngendlela enhle ukubona izwe. Indlela eyaziwa kunazo zonke yi-classic Inca Trail eya kuMachu Picchu. Eminye imizila edumile ifaka phakathi iCordillera Blanca - Huaraz, Colca Canyon - Arequipa, Ausangate Trek, Salkantay trek, Choquequirao trek ne-Inka Jungle trek ukuya Machu Picchu - uhambo lwe-adrenaline oluya eMachu Picchu.
Amanani weTrev angahluka kakhulu phakathi kwezinkampani, njengoba kungenza izimo zomsebenzi wabo ababambeli (azikho izilwane ezivunyelwe, ngakho-ke imishini ithwalwa ngabathengi abangabantu). Yize kukhona i-porter wage ephansi futhi abanikeli abaphethe umthwalo omkhulu (i-25kg / 55 lb), akuzona zonke izinkampani ezigcina izimangalo zazo!
I-Peru inikezela ngezinhlobonhlobo ezinkulu zemidlalo ye-adrenaline efana nokugibela, ukuhamba ngebhayisekili, umugqa we-zip, ukugibela amahhashi, ukusebenzisa i-surv, i-ATV, i-motocross, i-paragliding, i-canopy, ukuhamba ngezikebhe, ukushibilika kwe-sandboard, njll.
Omunye umsebenzi othandwayo okufanele wenziwe ePeru ukuhambela izilwane zasendle ezisemahlathini aseAmazon Imvula ezingabhekwa futhi njengendawo yokubonga yezemidlalo ye-adrenaline ngokuchitha isikhathi phakathi kwezilwane zasendle.
Indlela ezayo nezayo yokuhlola iPeru ukwazi izindawo ezakhiwayo zekhofi kanye nabakhiqizi bayo. Ezifundeni eziningana zezwe kubandakanya i-Cusco neSan Ignacio manje sekunohambo lwemini nobusuku obuvakashela amasimu abalimi bekofi, endaweni abizwa nge- "Chacras." Kulabo amafushane ngesikhathi, ukuvakasha okusheshayo kwehora le-2-3 kutholakala futhi Lima.
I-Peru inamasiko kwezokuvakasha futhi ilungele ukubukwa njenge-ATM yokuhamba cishe kuzo zonke izinyathelo zendlela. Yonke indawo bake babona isivakashi ngaphambili; bashintshela kwimodi "yobisi yabavakashi" uma bebona ukuthi awuyena owendawo. Yazisa kahle ngamanani, kangcono ngokubuza kwabendawo.
Ama-ATM atholakala ezweni lonke. Unophawu lwe-Cirrus noma Maestro kulo, ungakhipha imali kalula. Qiniseka ukuthi akekho ozama ukubona ikhodi yakho ye-PIN. Amanye amabhange awakhokhisi imali yokuthola imali kuma-ATM abo, noma kunjalo iningi lenza.
Emadolobheni amancane, kungenzeka ukuthi akukho muntu ozokwamukela ikhadi lakho lesikweletu noma amasheke wabahambi. Ngalesi simo, kufanele ukuthi unakekele ukuthi unemali eyanele nawe. Imvamisa emadolobheni amancane, izitolo zasendaweni zizokuguqula imali. Uma kunjalo, izomakwa ngokusobala. Thatha kuphela ama-US $ izikweletu osesimweni esihle ngoba izikweletu ezidatshulwe kancane noma zibukeka zindala ngeke zamukelwe.
IPeru idume ngemisebenzi eminingi yezandla ehlukahlukene, emnandi ngempela futhi engabizi kakhulu. Khumbula ukuthi ukuthenga imisebenzi yezandla kusekela amakhono endabuko futhi kusiza imindeni eminingi ukuba ithole imali ethambile. Funa i:
Amapulangwe, neminye imikhiqizo eminingi yoboya (i-alpaca) kuyo yonke iSierra.
Amakhaphethi odonga (tejidos).
Imidwebo ematsheni, ngamapulangwe namathanga omisiwe.
Ubucwebe besiliva negolide.
izinsimbi zomculo ezijwayelekile ezifana ne-pan flutes (zampoñas), izigubhu zesikhumba.
Ungemukeli noma iyiphi imisebenzi yezandla ebukeka (noma empeleni iyinto) yobumba bangaphambi kwe-Columbian noma ubucwebe. Akukho emthethweni ukuhweba ngakho futhi kungenzeka ukuthi kungathunjwa nje kuphela, kodwa kungashushiswa ngokuhweba okungekho emthethweni, noma ngabe okwangempela kungamakhophi noma kungamanga. Ukusebenzelana namaphoyisa ohlangothini lobugebengu kuyindlova futhi akumnandi ngempela.
Qaphela izinto ezingekho emthethweni (i-Bamba) zohlobo lwe-Alpaca izinto eziningi ezithengiselwe i-gringo engalingani empeleni ziyizinto ezenziwe ngoboya noma ezejwayelekile. Ngisho nasezindaweni ezinjengePuno ayikho indlela elula yokutshela uma yenziwe nge-Alpaca, kwesinye isikhathi ingaba nephesenti elincane le-Alpaca elihlanganiswe neminye imicu. I-Baby Alpaca ayiveli ezilwaneni zezingane kepha ukugunda kokuqala kanye nefayibha ithambile kakhulu futhi ihamba kahle. Ngokuvamile i-Alpaca fiber ine-luster ephansi kanye nesandla esinamafutha kancane kuyo futhi iyephuza ukululama kusuka ekwelulwa. Thenga bese uqhathanisa; i-Alpaca yangempela iyabiza.
Ukuxoxisana kuvame kakhulu. Uma ungasetshenziswanga kukho, hlonipha imithetho ethile. Uma uhlose ukuthenga okuthile, qala ubuze intengo, noma ngabe usuvele uyazi ukuthi empeleni kubiza malini. Ngemuva kwalokho hlola ukuthi konke kuhamba kahle yini. Yazi ukuthi iningi lemikhiqizo esezimakethe zezivakashi lizothengiswa cishe kuyo yonke eminye imakethe kukho konke ukuhamba kwakho ePeru naseNingizimu Melika, ngakho-ke zama ukungakhathazeki ngokuthi ungaphinde usithole isikhafu se-alpaca.
Unendlela yokuxoxisana ngaphandle kokusho intengo eqondile, futhi ithi “menos Nada?”, Uzobe usucela ukuthi bangakwazi yini ukwehlisa intengo.
Uma uthi "Cha ama-gracias" bazokucela ukuthi uyithenge futhi bakunikeze inani eliphansi. Vele uhambe uzungeze izitolo ezidayisa umkhiqizo ofana nalowo onamehlo akho kuye futhi lapho usungathola inani eliyisilinganiso nentengo ephansi. Bese uyothenga into oyifunayo kahle wazi ngentengo ephansi ongayithola. Iphuzu lonke lokushintshana linakekela kancane kunalokho abakwenzayo, ukwazi inani eliphansi kuzokusiza ubone ngokusebenzisa ama-antics abo. Ungazizwa kabi ngabathengisi, kuzoba nesinye isivakashi futhi yibhizinisi nje. Izimo zabo zobuso ngesikhathi se-barter zenziwa ukuze uthenge.
Izitolo ezinkulu zingatholakala kuphela emadolobheni amakhulu futhi zibiza kakhulu. Kuwo wonke amadolobhana, okungenani kunendawo eyodwa yemakethe noma ihholo, ngaphandle kweLima enenqwaba yezitolo ezinkulu, ezitolo ezinkulu kanye nezitolo zomnyango. Emadolobheni, kunezimakethe ezihlukile (noma izingxenye zemakethe eyodwa enkulu) zezindatshana ezahlukahlukene.
Izitolo ezinezindatshana ezifanayo zivame ukuhlukaniswa emigwaqweni efanayo. Ngakho-ke, uma uke wazi umgwaqo ofanele lapho ufuna okuthile okukhethekile, akufanele kube yinkinga ukwedlula lapho ekutholeni ngokushesha.
Ukuthi uzodlani - isiphuzo ePeru.
Amahhotela ePeru ajwayelekile kakhulu futhi ashibhile. Basuka ku-1 - izinkanyezi ze-5. Amahhotela ezinkanyezi e-5 ajwayele ukuvakasha kwephakeji noma ukuhamba kwebhizinisi, futhi akujwayelekile kakhulu ngaphandle Lima. Amahhotela ezinkanyezi e-4 ajwayele ukuba ngasohlangothini olubizayo futhi angavamile, kodwa emadolobheni amakhulu. Amahhotela ezinkanyezi e-3 awukuvumelana okuhle phakathi kwamanani nekhwalithi namahhotela ezinkanyezi we-1 ashibhile kakhulu, kepha ungalindeli ukuthi amanzi ashisayo noma indawo ephephile ikakhulukazi.
Okuyisisekelo ukukhathalela inhlanzeko nokudla kunzima ukuqinisekisa ukuphepha kokudla neziphuzo, ikakhulukazi emazweni asathuthuka. Noma kunjalo ungaqhubeka nokujabulela ukudla kwendawo; lokhu kuyingxenye yobumnandi bohambo lwamazwe omhlaba. Khetha. Izifo ongazithola zivela kwisifo esincane sohudo noma isifo sokuqaqamba kwamazinyo, ziye kwesinye isifo esibi (isib. Ukutheleleka kweParasitic) okungalimaza uhambo lwakho. Ngakho-ke kufanele uthathe izinyathelo ezithile zokuvikela: Zama ukudla ukudla okuphekwe kuphela Gwema ukudla okudla okuningana noma okunye ukudla okuye kwavuselelwa futhi kwaxhunyaniswa nokuthintana nezimpukane Gwema ukudla kwasolwandle ezindaweni ezingaziwa Izithelo nemifino engagudlukhuni kunzima ukuzifaka inzalo: ungazidli ngaphandle kokuthi unokuphepha ukuthi bahlanzwe emanzini aphuzwayo noma uma kungenzeka bethinta ngaphandle kokuthinta uginindela. Esiqwini esishisayo izithelo eziphephe kakhulu ubhanana kanye namaphaphu. Qaphela, ungenqaba noma yikuphi ukudla ocabanga ukuthi akuphephile, uma kunesidingo, cela ukudla okuphekiwe ikakhulukazi kuwe
Amanzi ompompi. Phuza amanzi kuphela uma uqinisekile ukuthi kuphephile. Musa ukuphuza amanzi ompompi. Uma usebenzisa amanzi ompompi ukuxubha amazinyo akho noma uphalaze umlomo, ukhafule ngangokunokwenzeka. Amanzi ompompi angenziwa baphuze ngokuwubilisa (ukuletha endaweni yokubilisa epanini kufanele kube kwenele) noma ngezindlela zokuzihlanza njengamaphilisi we-iodine noma ukukhanya kwe-UV. Amanzi asemabhodleleni ashibhile futhi anambitheka kangcono kunamanzi abilisiwe. Hlola ibhodlela ukuze uqiniseke ukuthi alivulwanga futhi ligcwalisiwe.
UChavin (Isiza Sokuvubukula)
I-Chan Chan Archaeological Zone
Isikhungo Somlando seLima
Imigqa namaGeoglyphs aseNasca nasePalpa
Isikhungo Somlando Sedolobha lase-Arequipa
Idolobha elingcwele leCaral-Supe